उपनिर्वाचनको बेला वडाध्यक्षले कम्बल वितरण गरेपछि काँग्रेसको आपत्ति
पोखरा । नेपाली काँग्रेस कास्कीले कास्की क्षेत्र नं २ अन्तर्गत पोखरा–१५, पट्नेरीका स्थानीयवासीलाई कम्बल वितरण गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काँग्रेस कास्कीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त वडाका वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेलले पट्नेरीका १२ जनालाई कम्बल वितरण गरेको भन्दै उक्त कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को दफा ३ को उपदफा १ (ख) विरुद्ध हुने बताए । विस्तृतमा
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनः नेकपा अध्यक्षद्वयले राष्ट्रपतिलाई भेटे
विप्लव समूहका पूर्वपोलिटव्यूरो सदस्य धमलाद्वारा पार्टी परित्याग
बालुवाटरमा नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै
उपप्रधानमन्त्री पाेखरेलद्वारा नेपालमा लगानी गर्न युएईका लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह
जथाभावी फोहर फाल्नेलाई बढी कर लगाऊँः मन्त्री पण्डित
भक्तपुर । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जथाभावी फोहर फाल्ने नागरिकको पहिचान गरेर जरिवानास्वरुप बढी कर लगाउनुपर्ने बताएका छन् । आज भक्तपुर भएर बग्ने हनुमन्ते नदी सफाइ अभियानको ३० औँ हप्ता तथा मनोहरा खोला सफाइ अभियानको ८० औँ हप्ताको अवसरमा आयोजित बुलेटिन विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
जनताको विश्वास र भरोसामा तलमाथि हुन्नः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले आफूहरूलाई प्राप्त जनताको विश्वास र भरोसालाई तलमाथि हुन नदिने बताएका छन् । वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकी नेत्री साहना प्रधानको चौथो स्मृति दिवसका अवसरमा आज नेकपाको केन्द्र्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारसँग समृद्धिको स्पष्ट दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रम रहेको बताउँदै त्यसका लागि सुदृढ सङ्गठन तथा जनताको विश्वास र भरोसा रहेको जनाएका हुन् ।
नेकपाको प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमाले हावी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेशका २८ पदाधिकारी शुक्रबार टुंगो लागेको छ । पार्टीको मापदण्ड मिचेर नेताहरूले भागबन्डा गरेका छन् ।
चार दिनको लागि किन जाँदैछन् प्रधानमन्त्री कोस्टारिका ?
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं साधारण सभामा भाग लिन शनिबार अमेरिका उड्न लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओली फर्कनुअघि भ्रमण दलका सदस्यसहित कोस्टारिका पनि पुग्दैछन् ।
चार महिनापछि प्रदेशमा यसरी टुङ्ग्याइयाे नेकपाकाे भागबण्डा
काठमाडौँ । पार्टी एकीकरणको चार महिनापछि सत्तारुढ दल नेकपाले प्रदेश स्तरीय कमिटी निर्माण गर्न सफल भएको छ । पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रबीचको भागबण्डा नमिलेर पेचिलो बनेको प्रदेश कमिटी निर्माणमा पूर्व एमालेलाई ६ वटा प्रदेशको इन्चार्ज र पूर्व माओवादी केन्द्रलाई एउटा प्रदेशको इन्चार्ज दिइएको छ । बहुमत प्रदेशमा इन्चार्ज नपाए पनि पूर्व माओवादी केन्द्रले बहुमत प्रदेशमा अध्यक्ष पाएको छ । केन्द्रले ४ वटा प्रदेशमा अध्यक्ष पाएको हो भने पूर्व एमालेले ३ वटा प्रदेशमा अध्यक्ष पाएको छ ।
सरकार छाड्ने उपेन्द्रको धम्कीपछि पप्पूमाथि कारवाही हुनेमा आशंका
काठमाडौं । वर्तमान सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष एवम् उपप्रधान तथा स्वास्थ्य, जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सांसद हरिनारायण रौनियारको निर्माण कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई कारवाही भए आफूले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएपछि रौनियारमाथि कारवाही हुने सम्भवना कमजोर बनेर गएको छ ।
काँग्रेसले संशोधित विधानका सम्बन्धमा सातै प्रदेशमा राय तथा सुझाव लिने
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले संशोधित विधानका सम्बन्धमा सातै प्रदेशमा राय तथा सुझाव लिने भएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै काँग्रेसले पनि त्यसअनुरुप विधान परिमार्जन गर्न सातै प्रदेशबाट राय तथा सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको हो ।
अाज रिहा हुँदै प्रकाण्ड, वार्ताकाे वातावरण बनाउन पुनः पक्राउ नगरिने
काठमाडौँ । वार्ताको वातावरण सहज बनाउन सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई आजै रिहा गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि प्रकाण्डलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले पटक–पटक पक्राउ गर्ने गरेको थियो । वार्ताकाे वातावरण सहज बनाउनकै लागि अब अदालतले छाड्न आदेश दिएलगत्तै प्रकाण्डलाई अर्को मुद्दामा पुनः गिरफ्तार नगरिने भएको हो ।
नेकपाः सातै प्रदेशका इन्चार्ज र अध्यक्षको टुङ्गो, कुन प्रदेशमा को ?
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा आज बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्ताव बमोजिम पार्टी जिम्मेवारी तोएिको हो ।
विकास समितिको सभापतिमा खड्का निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको सभापतिमा कल्याणीकुमारी खड्का निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन् । समितिको आजको बैठकले उनीलाई सर्वसम्मतरुपमा सभापतिमा निर्विरोध चयन गरेको हो ।